Denda rekudzivirira rekushandisa
Computer bhegi bhegi
New ladies chikwama batira ba ...
Vakadzi chikwama chakareba chikamu ...
New Wallet Pfupi Ladies Zip ...
Vakapusa vakadzi mafashoni madiki ...
Yakapetwa, inowachika uye inogara yakasimba bepa reDuPont pepa eco-hushamwari uye hune hutano hunogadzirisika bhegi rekutenga
Iyo mbishi yakasikwa ndeye yakasikwa fiber pulp, iyo isina zvinhu zvinokuvadza, yakasvibirira uye inoshamwaridzika zvakatipoteredza, inoderedzwa, inogona kudzokororwa, kuwachwa kakawanda, uye ichiri iine hunhu hwepakutanga. Kuramba kubvarura uye deformation.
DuPont bepa remasaga bhegi rakagadzikana nharaunda, riine hutano, rinogadziriswazve, rinopeta, rinowachika, rinogara kwenguva refu, kuchengetedza kupisa uye bhegi idzva-rekuchengetedza
Eco-inoshamwaridzika uye ine hutano DuPont bepa rakagadzirwa kumba hupenyu hupenyu bhegi Rakareruka uye mufashoni jimi bhegi dhizaini
Yakakwira-mhando yakasvibirira nharaunda yeDuPont bepa rakagadzirwa pamba hupenyu komputa bhegi mitambo bhegi rakareruka uye rakashongedzwa tsika
Reusable DuPont yakavharirwa pepa bhegi bhegi, rinopetwa, rinowachika, rinogara kwenguva refu uye risingabvumike-proof diki brown
Reusable insulated DuPont bepa bhegi bhegi, rinopetwa, rinowachika, rakasimba uye rinodonha-proof echinyakare brown varume, vakadzi, vana kubasa, chikoro, pikiniki, kumahombekombe, bhegi rekufamba
Laptop Backpack 17.3 Inch Makuru Varume Kufamba Laptop Backpack Isina Mvura Bhizinesi Chikoro Bhegi
* Yakasimba Nyaya: Iyi Laptop Backpack inogadzirwa yakasimba, isina mvura uye isina misodzi misodzi yepamusoro polyester fiber. Iine yakasarudzika yakapetwa laptop laptop, inokodzera mazhinji 13, 14, 15, 15 inch laptops 15.6, 16, 17, uye kusvika 17.3 inches / Ipad / komputa.
* Huru Kugona: Saizi yeiyi mens Laptop Backpack ndeye 35 x 23x 47 cm, iyo inogona kushandiswa mukuchengetedza kukuru uye inogona kugadzirisa nzvimbo yenzvimbo yezvinhu zvidiki. Kune matatu akapamhamara makuru makamuri ane akawanda akavanzwa muhomwe, ayo anogona kubata zvinhu zvakawanda, senge zvekushandisa kuyunivhesiti, zvekufambisa zvishongedzo, mbatya, zvinyorwa, zvinyorwa, uye mativi zipper homwe dzinogona kubata mabhodhoro emvura uye amburera kuti zvive nyore kuwana.
* Inofema uye Inonyaradza: iyi ergonomic laptop bhegi yevarume yakagadzirirwa chipenga chepamusoro-soro chinofema kumusana nemabhande epafudzi, izvo zvinogona kudzikisa kumanikidza kwepafudzi uye kuchengetedza musana wakaoma uye wakasununguka kwenguva yakareba. Iyo inogadziriswa bhande repabendekete uye yakasimba kugadzikana mubato inopa kunyaradza kukuru kune basa, kutandara, kufamba, basa uye chikoro.
Zita: Mufashoni bhizinesi bhegi
Ruvara: nhema, shava, pfumbu
Kukura: 35 * 23 * 47cm
Mucheka: Mucheka usina mvura weOxford
Slim laptop bhegi rebasa rebhegi ine USB yekuchaja chiteshi komputa bhegi inokwana 13.3 inch laptop
* Nyore Kuronga: Multi-homwe uye Ultra nzvimbo chengeta zvese zvako zvinhu zvakarongeka. Yakawedzera yekupedzisira-hombe huru imba inobata zvako zvezuva nezuva zviri nyore, senge A4-saizi, mbatya, zvekufambisa zvekufambisa, mabhuku, amburera, uye zvimwe zvinodiwa.
* Nyaradzo & Inogadzikana: Yakagadzirwa neyakareba mvura-isingagadzirise Polyester. Iyo yakakodzera kushandiswa kwezuva nezuva. Yedu yakatetepa laptop bhegi inogona kushandiswa sebhizinesi laptop bhegi, bhegi rekufamba, hofisi yebasa bhegi, koreji yekusekondari mudzidzi bhegi revakomana, vasikana, vechidiki, vakuru.
* Multipurpose Backpack: Isina mvura bhegi inopa yakasununguka uye yakasarudzika mafashoni ekushandisa zuva nezuva uye chero kupi kwepakati chikoro, chikoro chepamusoro, koreji, zororo, kufamba, kupera kwevhiki, rwendo rwehusiku, rwendo rwebhizinesi, dzimwe nguva kufamba.
* Ergonomic Dhizaini: Ergonomic dhizaini yeS-dhizaina yakasungwa bhanhire tambo uye padding kumashure dhizaini, yakagadzirwa kubva pakakwirira uye inofema chipanji uye machira, akashongedzerwa neringi-mhando chinogadziridzwa hasp, gadzirisa tambo kureba zvakasununguka, kudzikisa mutoro wehuremu, kudzivirira iyo kumashure uye pabendekete zvinobudirira, zvakanyanya kugadzikana kwehupenyu hwako
* USB yekuchaja Port: Laptop bhegi rinopa USB yekuchaja chiteshi kunze. Yakakura yekuchaja foni yako kana zvimwe zvigadzirwa zvemagetsi uchifamba. (Ndokumbira utarise kuti iro bhangi remagetsi harina kubatanidzwa)
Wallet-inodzivirirwa kadhi mubati ine wallet-inowedzerwa minimalist chikwama dhizaini-ultra-yakatetepa chikwama chevarume
* Iyi compact, inowedzerwa kadhi chikwama nhevedzano, compact, yakachengeteka uye yakakodzera pazviitiko zvakasiyana. Iyo yakatetepa kwazvo kubva kumakona ese uye yakanyatsogadzirwa kuti ideredze saizi yechikwama.
* Chikwama chiri kuwedzeredzwa zvine hungwaru netambo yakasungirirwa yepamusoro-soro, uye inogona kubata kusvika kumakadhi masere, ayo anogona kuiswa nekubviswa nekukurumidza uye nyore. Uye zvakare, yedu yesimbi kiredhiti kadhi mubati anoshandisa yakanaka kwazvo anodized aviation-grade aruminiyamu muviri, iyo yakasimba kwazvo asi isinganetsi kureruka.
* Chikwama chidiki ichi chinovimbisa kadhi risingabatanidzwe. Tiine yedu yakachengeteka kiredhiti mubati, hapana munhu anokwanisa kuwana yako data.
Varume nevakadzi Ultra-yakatetepa minimalist wallets-dehwe kadhi kesi pamberi muhomwe matete evarume zvikwama slim RFID ichivhara minimalist kiredhiti mubati
* Yakagadzirwa nemaoko, yakasimba: Chikwama chidiki ichi chakagadzirwa nemaoko akazara-ezviyo ane musono chaiwo. Tarisira mberi kwaro kugara kwemakore mazhinji!
* Minimalist dhizaini: Diki uye compact, yakagadzirirwa zvaunoda, hapana chimwezve. Maitiro: 4 kadhi slots, 1 ID hwindo uye 1 mari slot. Zviyero: 11 x 8.0 x 1.0 cm.
* RFID inovhara tekinoroji: kuona nyore kuwana maburi ezvigunwe uye kuvhara kweRFID pamakadhi echikwereti, makadhi ekubhengi, marezinesi ekutyaira uye makadhi eID. (Cherekedza: Chikwama ichi hachikwanise kuvhara mabheji eID, makadhi ekupinda kana makadhi emakamuri ehotera anoshanda pazasi zvakanyanya [120-150 KHz]).
* Chipo chakakwana: Inouya neakachena chipo bhokisi, ndiyo sarudzo yakanakisa yezvipo zvebhizinesi, zvipo zvekambani, mazuva ekuzvarwa, mhemberero, Kisimusi, Zuva raBaba, Zuva raValentine, vachati, murume akanakisa uye dzimwe nhambo dzakakosha.
Wallet-RFID anti-kuba brashi inodzivirira tekinoroji nechikwama, inodzivirira kadhi mubati-inowedzerwa minimalist chikwama dhizaini-Ultra-yakatetepa chikwama chevarume
* RFID ichivharira tekinoroji: chikwama chakachengeteka kuchengetedza hunhu hwako; kudzivirira mbavha kubva pakuvheneka michina; RFID tekinoroji inodzivirira yako yakavanzika ruzivo uye kiredhiti kadhi chengetedzo; dzinovimbisa yako zvakavanzika uye chengetedzo.
* Ultra-yakatetepa uye yekupedzisira-mwenje: Zvakachengeteka takura mari (anosvika mapfumbamwe akapetwa emabhangi) uye 1-12 makadhi, senge marezinesi ekutyaira, mapasipoti, makadhi echikwereti, inishuwarenzi, makadhi ekubhengi, makadhi ekuchengetedza zvemagariro uye makadhi ebhizinesi. Iyo yekupedzisira-mwenje uye gobvu muviri inoita kuti igadzikane kwehupenyu hwezuva nezuva kana kufamba.
* Yedu yesimbi kadhi kiredhiti mubati inogadzirwa neanoyevedza anodized aviation-giredhi aruminiyamu muviri, iyo yakasimba zvakanyanya, asi zvisingaite zvisingaremi.
* Iyo yakashongedzwa yakagadzirirwa kadhi mubati chikwama chipo chakanaka cheshamwari, murume kana bhizinesi shamwari paZuva raValentine kana zuva rekuzvarwa.
Nyowani PC trolley kesi inopetwa yekuchengetedza yekufambisa mukwende
● Rwendo runofadza: Sutukesi inopetwa inogadzirwa nemhando yepamusoro PC zvinhu, izvo zvine huremu huremu uye zvinodzivirira kusagadzikana.
Iyo yekukwirira-inogadziriswa inodzoserwa mubato inobvisa kudiwa kwekushungurudza musana wako; unogona kuisa mabhegi madiki uye zvinodikanwa pairi. Iko mukati kune kurongedza tambo dzinogona kubata mbatya dzako munzvimbo.
● Kunyangwe uri kuenda kubhizimusi kana kuzororo, unogona kutenga uine chivimbo chakazara.
Yiwu Sansan Lamp Kutengesa Co, Ltd.
© Copyright - 2010-2020: All Rights Reserved. ,